Kusvira munhu wandanga ndisingafungiri kubasa – Vanoda Zvinhu
Pane chimwe chibhebhi chekubasa kwangu chandakangosangana nocho pagraft chiri chicontractor. Hapana kana yandaimbogaya hangu nekuti hapana changa chakanyatsonaka pachiri. Manje ndakazonzi ndishande nacho waya waya because chaiita magetsi ini ndichiita networking saka we have to work together kuti andiisire routing ndishande. So pakushanda ipapo ndipo patakatanga kutaura tese and nyaya dzanga dzakawanda.
Chakazoti mumwe musi chikafunga kundiudza kuti varume vese vepacomoany pangu vanga vachinyenga kunze kwangu, nyangwe zvake chakavaramba. Ndakabva ndaziva kuti chii chaitevera.
Munhu ndookuti koini sei ndisina kuchinyenga ndikati aiwa kasisi. Ndine mukadzi kumba saka zvemagame zvinindinetsa especially tichiri mufirst year yemuchato. Chakazoti aiwa kuvhunza chete but answer yangu chainzwisisa.
One weekend ndakaiswa pacorner kubasa ndikanzi urikushanda apa ndaive nekwandanga ndanzi ndiuye kunohumwa moyo wangu ukarwadza. Varungu vakazongoti paunopedza utore mota uende nayo kumba nekuti wachema chema. Ndaenda kusite 1 man ndakasvika ndikawana kaelectrician kaya karipo kari kega ndikati asi tanzi toshanda tega zvikanzi ndiyo yatotaurwa.
Takakiya hedu graft iye magetsi ini network tikapedza around 12. Saka manje mataishandira maiva muserver room musina window musina camera apa muri access controlled. Vanhu vaive neaccess vanga vaenda kumashops nekuti ravo basa ranga riri rekutivhurira kanatapedza. Takati tofona fon ikati no network ndikazongoti vachauya havo. Takavamirira kudaro nyaya iya yekuti nei usina kumbondinyenga yakamutswa zvekare. Ndakaona kuti handiitize ndikazongoti haa handisi hangu interested coz ndinemukadzi. Chakazotanga kundiudza kuti dai ndakanyenga chakandipa mbutu yese and no strings attached nekuti icho hachiiti zvekudanana. Ini nemanyemwe ndikati ini ndikakusvira unotozondiita murume wako. Chakazongoti unonyepa ndisvire izvezvi tione kuti ungandigona here. I thought twice ndikaziva kuti ndikasasvira ndofa nekusekwa nekuti type remunhu uyu ndoriziva. Ndakazongoti huya tiende nekuti vanhu ava havadzoki anytime soon. Takatanga kukisana ini ndini ruoko pasi pework suit wanike munhu haana hembe pasi payo. Chakaisa ruoko muwork suit mangu ndookubata mboro ndookutanga kundibonyora. Ndakabva ndamutendeutsa ndikamubatisa maserver evaridzi ndikadzisa bhurugwa kuisa mumabvi wanike g string ye white lace meterial. Ndakaisa paside ndakapfugama kudaro ndini uyo ndoo chiso chese mumhata dzake rurimi pabeche. Ndakaridya beche ndichiita matinji ekudhonza nemuromo ndichidhonzera kumashure. Akatunda achichema pamusoro penzwi rake ndikati tabatwa. Chakanditi vhura bag rangu utore condom undisvire kani! Ndatotunda katatu usati wandisvira. Ndakanzwa muchina uchiita nharo dzekuda kubuda mubhurugwa pfungwa dzikambomira kushanda nekuti ndakaiisa yose isina condom. Ndaakanzwa kuti “Mai kani! Hauna kupfeka condom! Asi irikunaka zvakadaro. Svira svira svira usatunda kani. Ndoda kunakirwa nayo kwete kuzvara!!” Ndakaita manyemwe ndikati ndotongiokwesha yakadaro hapana kudzokera kumashure. Ndakawedzara speed ndikanzwa nyere dzoda kubuda ndikaiburitsa ndokupfeka condom riya. Ndakazochiita kunge ndiri pacompetition ndikachichovha ndakasimudzira mhata mudenga nyini yose iri pachena. Ndakazochibata beche nekumberi ne 1 hand ndikatambisa klitoris senge ndopenga. Ndakazoti ndotunda tose tikatunda..
Ndakabva ndanakirwa ne overtime zvekuti nyangwe isipo tongosvirana sezvo mai vemba vane mwana mucheche!
Next story Ndandisina kumbofungira ndichasvirwa nagarden boy wedu
Previous story Ndakazokajumha kababie kekuchurch, ndokutanga kukakwesha!